‘बैंकिङ प्रविधि सुरक्षित छ, शंका गर्नु पर्दैन’ - Online Khabar
माघ १५,२०७६ / ०२ : ३३
‘बैंकिङ प्रविधि सुरक्षित छ, शंका गर्नु पर्दैन’
Online Khabar 2076-5-25
२४ भदौ, काठमाडौं । केही साताअघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानका एटीएमबाट रकम चोरी गरेका चारजना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । त्यसपछिको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अर्का एक चिनियाँ र तीन नेपाली समातिए ।
यो समूहले बिभिन्न बैंकका अटोमेटेड टेलर मिसिन (एटीएम)को सिस्टम ह्याक गरेर तीन करोड ५८ लाख ८४ हजार २० रुपैयाँ निकालेको अनुसन्धानबाट खुल्यो, जसमध्ये एक करोड ७० लाख भारतका एटीएमबाट निकालिएको थियो । यो घटनाले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षामा तड्कारो प्रश्न उठेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनक शर्मा पौड्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एटीएमबाट अनधिकृत रुपममा ठुलो रकम निकालिनुले नेपालको बैंकिङ प्रविधि असुरक्षित रहेको देखायो होइन ?
असुरक्षित होइन, केही चुनौती देखिएका हुन् । प्रविधि प्रयोग चुनौतीमुक्त छैन । चुनौतीको सामना गर्दै प्रविधि अपनाउने हो । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा देखिएका समस्याहरुमा सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्ने हो । थप सुरक्षा प्रणाली अपनाउँदै प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्ने हो ।
एटीएम ह्याकिङबारे कतिबेला जानकारी पाउनुभयो ?
घटना सार्वजनिक भएपछि नै थाहा पाएका थियौं । त्यसपछि हाम्रोमा पनि केही भयो कि भनेर शंका गर्‍यौं‌ । केही नभएको थाह पाएपछि कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने भयो । भिसा कार्डबाट हुने कारोबारहरु संसार घुमेर आउँछ । कहाँ, कसरी, के भयो भन्नेबारे पुरै जानकारी आइसकेको छैन । यस विषयमा सबैले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् ।
यस किसिमको ह्याकिङबाट जोगिन अपनाइने सावधानी चाहिँ के हो ?
नेपाली बैंकका लागि यो नयाँ किसिमको घटना हो । यसले नसोचेकै विषयमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने महशुस गराएको छ ।
बैंकिङ प्रविधिमा स्तरोन्नती गर्ने बेला भएको हो ?